Lesona fandraisana hafatra avy amin'ny manam-pahaizana amin'ny mailaka | Martech Zone
Alarobia 2 Janoary 2019 Alarobia 2 Janoary 2019 KC Karnes
Ilay hafatra fandraisana dia mety ho toa tsy dia misy dikany firy satria maro ny mpivarotra no mieritreritra rehefa avy nanao sonia ny mpanjifa dia vita ny taratasy ary voamarina amin'ny andraikiny izy ireo. Amin'ny maha mpivarotra antsika anefa dia anjarantsika ny mitarika ny mpampiasa amin'ny manontolo traikefa amin'ny orinasa, miaraka amin'ny tanjon'ny fampiroboroboana tsy mitsaha-mitombo sandan'ny androm-piainan'ny mpanjifa.
Ny iray amin'ireo lafiny manandanja indrindra amin'ny traikefan'ny mpampiasa dia ny fahatsapana voalohany. Ity fahatsapana voalohany ity dia mety hametraka ny zavatra andrasana ary raha tsy ampy trano izy ireo dia mety hanapa-kevitra ny mpanjifa ny hampitsahatra ny diany avy hatrany.
Orinasa maro no tsy manaiky ny maha-zava-dehibe ny onboarding. Ny tsy fahombiazana amin'ny fampianarana ireo mpampiasa ny faritra maro azon'ny orinasa omena lanja dia mety hitera-doza amin'ny ho avin'ny orinasa. Ny hafatra fandraisana dia mety ho sotro volafotsy hamelomana ny mpanjifa ity fampahalalana tena lehibe ity.
Ka inona avy ireo singa amin'ny fampielezana hafatra miarahaba antsika? Manomboka amin'ny fandinihana ireo orinasa mahomby amin'ireo mpampiasa amin'ny alàlan'ny fampielezan-kevitr'izy ireo, misy lohahevitra iraisana:
Alefaso amin'ny adiresy mailaka olona.
Ataovy manokana ny anaran'ilay mpandray.
Lazao izay azon'ny mpanjifa andrasana manaraka.
Manolora atiny sy loharano maimaimpoana miaraka amin'ny fihenam-bidy.
Mampiroborobo ny marketing amin'ny referral.
Ny fampiharana ireo paikady ireo ao anatin'ny hafatra fandraisanao mailaka dia afaka manampy amin'ny fampitomboana ny tahan'ny click-through sy ny firotsahana. Ny personalization amin'ny mailaka fotsiny dia hita fa nampiakatra ny tahan'ny misokatra 26%.
Ny fironana mahaliana iray hafa amin'ny mailaka dia ny fanomezana sary mihetsika ao anaty ireo sary hahasarika ny maso haingana sy hitazomana azy. Ny GIF, ohatra, tsy manome afa-tsy zoro vitsivitsy izay mitazona ny haben'ny rakitra ary mamela ny mailaka HTML hitazona haingam-pandeha haingana.
Ny marketing amin'ny referral dia nanjary fampidirana lehibe hafa ao anatin'ny hafatra fandraisana mba hampiroboroboana ny orinasa amin'ny alàlan'ny vava. Rehefa mizara ny fisoratana anarana na mividy namana vao haingana ny mpanjifa dia mety ho tetika fanovana mahery vaika indrindra io, ka izany no antony ilan'ny mailaka voalohany fotoana hambolena ity voa ity. Iray amin'ireo paikady tsara indrindra hampiroboroboana ny varotra referral amin'ny fahombiazana ny fanaovana tolotra roa tonta. Izy io dia manome ho an'ny mpanjifa mizara sy ny mpandray azy miaraka amin'ny fandrisihana hanao zavatra amin'ilay referral.
Mampiasà paikady toa ireto sy maro hafa ho anao fampielezan-kevitra hafatra tongasoa amin'ny mailaka afaka manampy amin'ny fampiroboroboana ny salama ho an'ny mpampiasa salama sy ny traikefa ananan'ny mpanjifa tsara. Ampiasao ny sary etsy ambany avy amin'ny CleverTap mba hitarika ny paikadin'ny hafatra arahinao.
Tags: personalization mailakatoro-hevitra amin'ny hafatrahafatra mailaka an-tsambohafatra onboardingmarketing amin'ny referralhafatra mahafinaritra
KC Karnes dia tetikady malaza sy mpandraharaha fanta-daza tompon'andraikitra amin'ny fampiroboroboana ireo orinasa teknolojia mafana indrindra ao Silicon Valley, ao anatin'izany ny CleverTap, ny Intelligent Sehatra Marketing amin'ny finday.